यदि तपाईंलाई कहिले पनि फाइदाहरूबाट वञ्चित गरिएको छैन, बीमा सम्झौतामा पेस गरिएको छ, वा जसको बारे सुनेको छ - तपाईं भाग्यशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ! संयुक्त राज्य अमेरिकामा बीमा उद्योग सबैभन्दा लाभदायक मध्ये एक हो। गणित एकदम सरल छ, अधिक मान्छे मर्नु पर्छ - राम्रो मुनाफा।
के हामी यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौं? इन्टर्नेट र ब्लगोस्फीयर? के हामी शाब्दिक सन्देशको साथ खोज ईन्जिन बमबारी गर्न सक्छौं? Cigna Sucks र फरक पार्नुहोस्? तिनीहरू दाबी गर्छन् कि तिनीहरू केयरिंगको व्यवसायमा छन्। के यो सत्य हो? के हेरचाहमा वास्तवमा हेरचाह नगरी भन्दा बढी पैसा खर्च हुन्छ? म विश्वास गर्छु कि डाक्टरहरूले ख्याल राख्छन्, तर बीमा कम्पनीहरूसँग विपरित प्रोत्साहन हुन्छ।
यी कथाहरू दुबै क्रोध र मलाई डराउँछन्। यदि तपाईंसँग Cigna मा स्टक वा एक म्युचुअल फन्डको स्वामित्व छ जुन मिक्समा Cigna छ, म तपाईंलाई आग्रह गर्दछु कि यस्तो कम्पनीलाई समर्थन नगर्नुहोस्। यो समय हो कि बीमा कम्पनीहरूले तिनिहरू तिर्ने व्यक्तिको रगतले आफ्नो जेबको अस्तर छोड्छ।
नतालिनको संघर्षबारे अधिक:
डिसेम्बर १, २०१ 22 2007:२:12 अपराह्न
डग: मैले हिजो हिजो "सिको" हेरेको थिएँ। डरलाग्दो।
डिसेम्बर १, २०१ 22 2007:२:2 अपराह्न
मेरो लागि डरलाग्दो कुरा यो मात्र हो - यस देशको बीमा कम्पनीसँग डाक्टरले जिन्दगी लम्बाइ राख्न वा जीवन बचाउने जिम्मेवारीहरू अस्वीकार गर्ने अधिकार छ।
जीवन वा मृत्युको निर्णय गर्ने व्यवसाय अवैध हुनुपर्दछ। सादा र सरल।
डिसेम्बर १, २०१ 22 2007:२:6 अपराह्न
हो, यो डरलाग्दो छ, तर यो लामो समय को लागी सत्य हो। सम्पूर्ण घटना केही विडंबनापूर्ण छ: केहि मानिस मर्न पर्छ किनभने एक दाता अंग उपलब्ध छैन। यहाँ हामी सायद त्यहाँ एक मामला थियो जहाँ एक थियो, र त्यो प्राप्त गर्न सकेन।
वा हुन सक्छ, ऊ हुन सक्छ, तर त्यसपछि उनका परिवारका बाँकी सदस्यहरू सडकमा पेन्सिलहरू बेच्न पर्थ्यो उनीहरूको आफ्नै स्रोतसाधन जलाइसकेपछि। किन उनीहरूले सोचे कि उनीहरूसँग बीमा छ। यस चित्रको साथ केहि गलत छ ...
डिसेम्बर १, २०१ 22 2007:२:7 अपराह्न
तपाईंलाई यहाँ देख्न राम्रो लाग्यो र आशा छ तपाईंले राम्रो गरिरहनु भएको छ।
मलाई आशा छ कि हामी हाम्रो विधायिकाले बिरामीहरूको हेरचाह छोड्ने आवश्यक दबाब लागू गर्न सक्दछौं - बिमा कम्पनीसँग होइन।
समस्या यो छ कि स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरूको तल्लो लाइन लाभ भुक्तान नगर्नेमा निर्भर गर्दछ। मेरो छोराको औषधिको लागि स्वीकृति लिने क्रममा मैले सामना गरेको यही कुरा हो। उनले जीरटेक-डीका लागि अनुमोदन प्राप्त गरे जुन २०० 2004 मा लडाई सुरु भएपछि गैर-सुत्र औषधी हो। मैले गरेन हामी दुबै एडीएचडीको लागि समान औषधी दिइएका थियौं। मेरो अनुमोदन भयो; उसको थिएन। यो यस बर्षसम्म अनुमोदन भएन, जब Zyrtec-D OTC बिक्री को लागी स्वीकृत भयो? संयोग? तपाईं निर्णय।
हाम्रो कथा यसको तुलनामा सानो छ, तर सिद्धान्त अझै पनी हो। तिनीहरूले हड्डी मज्जा प्रत्यारोपण कभर गरेका थिए र उनीहरूको दिमागमा हेरचाह गरे पछि उनीहरूले यस छोरीका लागि कुनै थप महँगो उपचार अनुमोदन गर्ने दायित्व पूरा गरे। मलाई शंका हो कि यस अनुरोधले शुरुमा कुनै जान्न योग्यको पहुँच पायो (ग्यास्ट्रोएन्टेरोलॉजिष्टले साइक्रियाट्रिक औषधिहरू स्वीकृत गर्ने बारेमा मेरा नोटहरू हेर्नुहोस्, उदाहरणका लागि), त्यसैले यो होईन भन्नु अपेक्षाकृत सरल थियो। चार डाक्टरले अपील गरे पनि उनीहरूले इन्कार गरे।
माइकल मूरसँग यो धेरै अधिकार छ: बिरामीको डाक्टर बाहेक अरू कसैको हातमा चिकित्सा निर्णयहरू राख्नु गलत छ। र Cigna मा तथाकथित 'चिकित्सकहरू' को लागी मैले सोध्नु पर्छ उनीहरू कसरी हिप्पोक्रेटिक शपथमा हस्ताक्षर गर्छन् भनेर उनीहरूले हस्ताक्षर गरे।
अनुसार फोर्ब्स, एच एडवर्ड हानवेको कुल क्षतिपूर्ति $ २.28.82..5२ मिलियन छ र उसको-बर्ष $ .78.31$..6१ मिलियन छ। हान्वे ign बर्षको लागि Cigna (CI) का सीईओ छ र २ 28 बर्षदेखि कम्पनीमा छ।
यसरी उसले मेलमिलाप राख्छ।
डिसेम्बर १, २०१ 25 2007:२:2 अपराह्न
दुर्भाग्यवस हामी मध्ये धेरै जसो अमेरिकीहरू जीवन बोसो, गूँगा र खुसीको माध्यम भएर जान्छन्। हामी यस किसिमको दुर्घटनाहरूको बारेमा पढ्छौं र सोच्दछौं कि यो म वा मेरो परिवारलाई हुने छैन। हामी यसको महत्त्वलाई विचारहरूसँग कम गर्न खोज्छौं जस्तै "उनी दरारमा पर्‍यो" वा "उनी जे भए पनि मर्दछन्"। हाम्रो प्रेस राम्ररी अनुसन्धान गर्न र बिमा कम्पनीहरु द्वारा नकारात्मक र आपराधिक गतिविधि मा रिपोर्ट गर्न असफल छ किनभने धेरै बीमा कम्पनीहरु प्रायोजकहरु तिर्ने पनि छन्। हामीसँग जॉन स्टोसेलले माइकल मूर्स फिल्म सिको जस्ता नाटालिन्सको मृत्युको केहि मिनेट अगाडि विलफाइ गर्ने जस्ता पत्रकारहरू छन्।
जबसम्म हामी सबै जना आक्रोशित हुँदैनौं र वास्तवमा कलहरू गर्दैनौं, चिठीहरू लेख्दछौं र हाम्रो आक्रोश प्रकट गर्दछौं, यी अभ्यासहरू जारी रहनेछ। यसलाई तपाईंको कलम, तपाईंको मुख र तपाईंको जेब पुस्तकको साथ भन्नुहोस्।
तपाईंको क cong्ग्रेसनलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। अविश्वसनीय समाचार रिपोर्टरहरूलाई ईमेल गर्नुहोस्। सम्पर्क गर्नुहोस् र यी समाचार शोहरूमा विज्ञापन गर्ने कर्पोरेसनहरूलाई बहिष्कार गर्ने धम्की दिनुहोस्।
यो सम्पूर्ण कुराले बढि प्रश्नहरू खडा गर्छ भने मेरो लागि उत्तरहरू।
मैले पढेको कुराबाट, यदि उनी ट्रान्सप्लान्ट भयो भने उनी छ महिना बढी बाँच्न सक्छिन्। उनी पक्कै पनि भन्दा लामो समय बाँच्न थिएन। उनलाई टर्मिनल बिमारी थियो।
म परिवारका लागि महसुस गर्छु। तर यो मिडिया रिपोर्टले यसलाई बनाउन चाहेको जस्तो काटिएको र सुक्खा छैन। यदि यो उनको उपचार प्राप्त गर्ने र २० बर्ष सम्म बाँच्ने कुरा हो भने ... यो कुनै दिमागमा छैन। तर यो ट्रान्सप्लान्ट पाउँदा, उनलाई केहि एन्टी-रिजेक्शन औषधि लिन आवश्यक पर्ने थियो ... जसले उनलाई पहिले नै कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली लिएको थियो र यसलाई अझ नराम्रो बनाएको छ ... जसले क्यान्सरलाई अझ छिटो फैलिएको छ। र क्यान्सर पहिलो स्थानमा टर्मिनल थियो।
र म अहिले स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरूसँग मेरो आफ्नै लडाईको माध्यमबाट जाँदैछु। त्यसैले मलाई थाहा छ तिनीहरू तल अव्यावसायिक रूपमा हुन सक्छन्। र मेरो दावी केवल दुई सय डलर मात्र हो ... कहिँ पनि यो दावी वरिपरि घुम्ने छ वटा आंकडाको नजिकै छैन।
म निश्चित छु कि त्यहाँ हराइरहेका धेरै टुक्रा छन्, तर मेरो लागि मुख्य रेखा केहि चिकित्सक र नर्सहरूले उपचारको लागि अनुरोध गरे र ती बिमा कम्पनीले भिटो गरे। हामीले यो पक्का गर्नु पर्छ कि त्यो कहिले पनि हुँदैन।
तपाईको लडाई को लागी शुभकामना! म यस देशमा धेरै जसो 'बीमा नभएको' मध्ये एक हुँ - म अधिक वजनको छु र मेरो आफ्नैमा लिन सक्दिन। (मेरा बच्चाहरू आफ्नै नीतिमा कभर गरिएको छ)।
म डाक्टरहरूलाई यत्तिको भरोसा गर्छु जति म बिमा कम्पनीहरूमा विश्वास गर्छु।
के तपाईं त्यस्तो क्षमताको लागि अनुरोध गर्नुहुन्न जुन डु boat्गामा भारी बोक्ने धनको साथ तपाईंको जेबलाई रेखा दिन्छ?
यसैले तपाईं तेस्रो पक्ष मध्यस्थतामा अपील गर्न सक्नुहुन्छ निर्णयहरूको लागि अस्वीकृत। त्यसैले एक व्यक्ति जसले:
ए परिवारको भावनाहरु बाट प्रभावित छैन।
B. तिनीहरूको तल्लो रेखाबाट प्रभावित हुँदैन (बीमा र डाक्टरहरूको लागि जान्छ)
अन्तिम निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ।
यो संयोग होइन कि धेरै चिकित्सकहरू आफ्नै अधिकारमा करोडपति हुन्छन्।
त्यसो भए विषयको बारेमा, के तपाईं विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको समर्थन गर्नुहुन्छ?
डिसेम्बर १, २०१ 26 2007:२:2 अपराह्न
मलाई धेरै केहि डाक्टरहरू चिन्न रमाईलो लाग्यो र बिमा कम्पनीहरूले उनीहरूलाई कसरी प्रभाव पारेको देखेर दुःखी भए। मेरो एक साथीलाई उसको 'उत्पादकता' सुधार गर्न प्रत्येक बिरामीसँग 'कम समय' खर्च गर्न धकेलीयो। मैले उनलाई आफ्नो तलबको १/1 खराबी बीमामा खर्च गरेको पनि देखे (अर्को लाभदायक उद्योग)।
उनीसँग डाक्टरको समूहमा सामेल हुनको सट्टा आफ्नै अभ्यास गर्नु भन्दा ऊ बीमा कागजपत्र लिन सक्ने कुनै तरिका थिएन। यो एक हृदय ब्रेकर थियो किनभने ऊ एक शानदार डाक्टर थियो र उत्पादन लाइन हेल्थकेयरमा ट्युनल हुन योग्य थिएन।
मलाई लाग्छ कि तपाईले पत्ता लगाउनुहुनेछ कि विशाल बहुसंख्यक डाक्टरहरू करोडपति होइन र अझ बढि बिरामी हेरचाह छोड्दैछन् किनकि उनीहरूसँग व्यवहार गर्नु पर्ने सबै बकवासका कारण। यो गडबड छ
पुन: युनिभर्सल स्वास्थ्य सेवा
म क्यानाडामा years बर्षको लागि बसें र म वास्तवमै सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवालाई समर्थन गर्दछु (मेरो रूढीवादी पालनपोषणको त्रासको लागि)। कारण सरल छ - म विश्वास गर्दछु चिकित्सा एक सामाजिक मुद्दा हो, एक व्यापार होईन ... यद्यपि अमेरिकामा हामीले यसलाई बूमिंग व्यवसाय बनायौं।
क्यानडाका चुनौतीहरू छन्, म स्वीकार गर्दछु। हामीले यहाँ सुनेको भयावह कथाहरू केहि र अधिक बिचका छन्, यद्यपि।
मलाई विश्वास छ कि त्यहाँ विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको लागि एक ठूलो व्यावसायिक फाइदा पनि छ - मानिसहरू आफ्नो व्यवसाय शुरू गर्न डराउँदैनन् जब उनीहरूलाई आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य सेवाको बारेमा चिन्ता छैन। व्यक्ति अब खराब काम छोड्न डराउँदैनन्, कि त सुधार कामका सर्तहरूमा।
म साँच्चिकै लाग्छ कि यो एक कदम माथि छ। सबै पछि, यदि तपाईं एक बीमा सीईओ $ २ million लाख एक वर्ष तिर्न सक्नुहुन्छ, केहि सुव्यवस्थितको लागि अवसर छ, हैन?
होईन। यदि तपाईं देख्नुहुन्छ भने ORE 33% तपाईंको बीमा को लागि सरकारलाई आफ्नो आय को… अधिक अगाडि जानुहोस्। तर यो अहिलेको रूपमा खडा भएको रूपमा ... म (250 / महिना पूर्ण (धेरै राम्रो) मेडिकल बीमाको लागि भुक्तान गर्छु। जे होस् मेरो रोजगारदाताले अधिक धेरै तिर्दछन्। तर त्यो विकासकर्ताहरूलाई रोजगार दिने अंश हो।
विडम्बना भनेको यो हो कि हामीले पहिले नै त्यो तिर्ने गर्छौं, यद्यपि सीके। जब एक बीमा नभएको व्यक्तिको उपचार हुन्छ, तपाईले यसको लागि करहरू र बढाइएको मेडिकल दरहरू इत्यादि मार्फत तिर्नुहुनेछ। हामी पहिले नै विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको लागि भुक्तान गरिरहेका छौं… तर यो उपचारको लागि मात्र हो - निवारक औषधी होईन।
डिसेम्बर १, २०१ 26 2007:२:4 अपराह्न
तपाईंको टिप्पणीको सम्बन्धमा कि नतालिनले months महिना प्रत्यारोपण संग भएको थियो - गलत। ट्रान्सप्लान्ट बिना, तिनीहरूले उनलाई बाहिरीमा छ महिना दिए। अस्थि मज्जा ट्रान्सप्लान्टले ल्युकेमिया उन्मूलन गर्न सफल भएको थियो तर लागत कलेजोको क्षति हो जुन अपूरणीय थियो। यदि उनले ट्रान्सप्लान्ट प्राप्त गरेकी भए, उनीसँग पूर्ण जीवनको आशा थियो। यो बिना, त्यो बर्बाद थियो।
प्रणाली पूर्ण रूपमा बिग्रिएको छ जब डाक्टरहरूसँग डाक्टरहरू हुने क्षमता छैन। यदि तपाईं तिनीहरूलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने, सायद यो किनभने उनीहरूले बचावात्मक औषधि अभ्यास गर्नुपर्‍यो जहाँ उनीहरूले बीमा गर्ने व्यक्ति, बिरामीलाई सन्तुष्ट पार्छ र बीमा दायित्व जोखिमलाई पनि पन्छाउँदछ।
प्रणाली फिक्सिंगको अर्थ दुर्व्यवहार क्षति पुरस्कार र दायित्व मुद्दाहरूको लागि आधार सीमित गर्न, बीमाकर्ताहरूको नाफा सीमित गर्नु र चिकित्सकको रूपमा आफ्नो शिक्षाको लागि १०० डलर भन्दा बढी तिर्ने मान्छेहरूको हातमा चिकित्सा अभ्यास फिर्ता राख्नु हो। तपाईले डाक्टर किर्सचेनब्युमको शृंखलाहरू डाक्टरहरू, पैसा र मेडिसिनमा फरक दृष्टिकोणको लागि पढ्नुपर्दछ। यहाँ सुरू गर्नुहोस्.
मैले पढेको सबै कुराले कलेजो ट्रान्सप्लान्टको लक्ष्यलाई जनाउँदछ जस्तो लाग्थ्यो अर्को% महिनासम्म बाँच्ने of 65% संभावना।
अब जस्तो मेरो सुरुको पोष्टले भने, यदि यसले जीवनलाई २० बर्षसम्म सम्भव बनाएको भए… सबैका लागि यो। तर यदि यसको छ महिना ... म दुबै निर्णयको लागि माथि र माथि पुग्ने छैन। र सोच्दछ कि तेस्रो पार्टी मध्यस्थता मान्य समाधान हो।
र ती मुद्दाहरूको बारेमा, मलाई लाग्दैन कि यो निर्णय सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा हो, जसले हाम्रो बोझलाई हाम्रो सरकारमा सार्छ र उनीहरूले चूस्छन्।
यो ठीक हो, किनकि तपाईंले संकेत गर्नुभयो ... दुर्भावना क्षतिहरू र अन्य नियमहरूलाई सीमित गर्दै। तर मैले स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थापनलाई हिलारी क्लिन्टनको जस्तो मनपर्दैन। स्पष्टसँग भन्नुपर्दा मेरो ट्याक्सको पैसा खर्च हुने समस्याहरू छन् ... नाक रोजगार जस्ता 'स्वास्थ्य समस्याहरू' को लागी भुक्तान गर्न आवश्यक पर्दैन।
डिसेम्बर १, २०१ 26 2007:२:8 अपराह्न
प्रति एक एसोसिएटेड प्रेस लेख मा http://ap.google.com/article/ALeqM5hFp8DsNC_gJwb9q72kNfDiZCioSwD8TM2SAO1युसीएलएका डाक्टरहरू उद्धृत गर्दै भनेका छन् "नतालिनको जस्तो अवस्थामा बिरामीहरूलाई la महिनाको बाँच्ने दर 65 XNUMX प्रतिशत छ।"
के मँ बुझ्छु यसको अर्थ त्यो हो कि उनीसँग पहिलो percent महिना बाँच्ने 656प्रतिशत सम्भावना छ, र तपाईले उल्लेख गर्नुभए जस्तो गरी उनी6महिनामा मर्ने थिए। उनको टर्मिनल बिमारी थियो किनभने उनको कलेजो फेल भएको कारण ल्युकेमियाको उपचारले गर्दा भएको हो। मेरो बुझाइ यो हो कि यदि उनले6महिनासम्म गरिन् भने, उनीसँग धेरै वर्ष लामो हुने प्रत्येक अवसर हुने थियो।
यो ईमानदारीसाथ तपाईंको पोष्टहरूबाट मलाई देखा पर्दछ जुन तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि स्वास्थ्य सेवा जसले केही राम्रो गर्न सक्दछ केवल उनीहरूलाई उपलब्ध हुन सक्दछ जो यसलाई किन्न सक्दछ, र सबैजना मरे पछि मात्र राम्रो हुन्छन्। म तपाईंको धेरै बिन्दुहरू र सुझावहरूसँग सहमत छु; मलाई लाग्छ कि तेस्रो पार्टी आर्बिट्रेशन एक राम्रो विचार हो, विशेष गरी यदि यो छिटो छ, तर तपाइँको कथित धारणा "साथै उनको मृत्यु हुन दिनुहोस्, उनी जे भए पनि जाँदैछ" बरु उत्साहित मतलबको रूपमा आउँदछ। यसले यस्तो प्रभाव पार्छ कि तपाईं केवल आफैंमा रुचि राख्नु हुन्छ र अरु कसैलाई पनि।
म सबैजना बाँच्न चाहन्छु र स्वास्थ्य बीमामा पहुँच होस् भन्ने चाहान्छु, तथापि, मलाई लाग्दैन कि यो सरकारको स्थान हो कि यसलाई प्रदान गर्ने।
बरु मँ कम्तिमा सरकार देख्छु (अर्थात शून्य IRS), यस भन्दा बढि होइन।
तपाईंलाई कसरी लाग्छ हाम्रो संस्थापक पिताहरूले यो गर्नुभयो? यसको जवाफ हो कि डाक्टरहरूमा बोझ कम (यस्तै कानून सूट) बनाउनु हो र त्यो बोझ प्रत्येक करदातालाई सार्नु हुँदैन। हाम्रो सरकार आफैंमा अयोग्य साबित भएको छ र हाम्रो चिकित्सा जीवनसँग पनि विश्वास गर्नु हुँदैन। उनीहरूको चार्जमा, यस्ता केसहरू अधिक सामान्य हुन्छन्, कम सामान्य छैनन्। केवल हृदय विफलता र क्यान्सरबाट पीडितको क्यान्सर सर्भर रेटको तथ्या at्क हेर्नुहोस्। निजी औषधि धेरै बढी प्रभावी छ।
तर हातमा केस को रूप मा, मलाई फेरि यो भन्न गरौं .. यदि रोगनिदान पछि ट्रान्सप्लान्ट पछि लामो जीवनको लागि सम्भावना थियो भने ... तब म यो सबैको लागि हो। तर मैले तपाईले नकारात्मक तरिकाले औंल्याएको कथन पढें।
राम्रोसँग लेखिएको, यसमा तथ्य तथ्य शैली लेख वास्तवमै हेर्न चाहानुहुन्छ।
यो सजिलो विषय होईन र भावनात्मक तर्कहरूको साथ एक हुनु हुँदैन। मात्र तथ्यहरू m'am।
तथ्यहरू सरल छन्, Cigna बिरामीलाई निको पार्न खर्च गर्न चाहँदैन, उही Cigna Glendale ले यस परिवारलाई गरे, उनीहरूले सकेसम्म सबै तरिकामा लडे, केवल सरकार एजेन्सीहरू पत्ता लगाउन यी व्यक्तिहरूले उपभोक्तालाई दुर्व्यवहार गरौं, र केही पनि गरेनन्। सकियो। यो कभर गरिएको छ।
भ्यालेन्सिया, क्यालिफोर्निया लेखेर कांग्रेसी
कांग्रेसीले लेखेका थिएः मे th० तारिख १ 30 1996 Cor को निगम विभागलाई लेखेको पत्रमा। पत्रको प्रतिलिपि जो जोशुआ गोडफ्रेलाई प्रदान गरियो।
म मेरो निर्वाचन क्षेत्र जोसेफिन जोशुआ गोडफ्रेको तर्फबाट लेख्दै छु जसले कैलिफोर्नियाको इजाजत प्राप्त HMO, CIGNA स्वास्थ्य सेवाको साथ गम्भीर कठिनाइ भोगेका छन्।
श्रीमती गोडफ्रेले सिग्नालाई मार्च १ 1993 1994 from देखि अगस्त १ 1993 XNUMX through सम्म उनको फोक्सोको क्यान्सरको राम्रोसँग निदान र उपचार गर्न असफल भयो। एक वर्ष पछि गैर सिग्ना डाक्टरहरूले उनको बायाँ फोक्सोमा कार्सिनोइड ट्यूमर सजीलै पहिचान गरे र श्रीमती गोडफ्रेलाई भने कि १ um XNUMX early को शुरुमा ट्यूमर निदान गरिएको हुनुपर्‍यो। सिगनाबाट ट्यूमर अस्तित्वको बारम्बार अस्वीकारको बावजुद ट्यूमर अन्ततः एसटीमा हटाइयो। Burbank क्यालिफोर्निया मा जोसेफ अस्पताल। एक पोस्ट अपरेटिव प्याथोलजी रिपोर्ट गर्दछ ट्यूमर "पूर्ण रूपमा हुर्केको… पूर्ण परिपक्व थियो।"
GIGNA द्वारा जाँच गर्दा श्रीमती Godfrey बारम्बार चिकित्सा उपचार को लागी एक विशेषज्ञ रेफर गर्न भनियो। केही अकल्पनीय कारणहरूको लागि GIGNA ले उचित चिकित्सा उपचारको लागि एक विशेषज्ञसँग परामर्श गर्न इन्कार गर्‍यो। सीआईजीएनएले श्रीमती गोडफ्रेको मेडिकल रेकर्ड पनि जारी गर्न अस्वीकार गर्‍यो ताकि अर्को चिकित्सकले उनको मेडिकल इतिहास र उपचार आदेशको समीक्षा गर्न सक्थे। दर्जनौं अनुरोध पछि मात्र रेकर्ड जारी गरियो। यद्यपि श्रीमती गोडफ्रेले सीआईजीएनएलाई कुप्रथाबाट जोगाउनका लागि कागजातहरूलाई द्वेषपूर्ण ढtered्गले परिमार्जन गरिएकोमा विश्वास गर्छिन्।
क्यालिफोर्निया राज्य को HMOS मा दर्ता उपभोक्ताहरु को रक्षा गर्न उत्तरदायी छ। राज्यले उपभोक्ताहरूलाई एचएमओएसको बारेमा शिक्षा दिन र सूचित गर्नु आवश्यक छ। एचएमओएसका १२ करोड क्यालिफोर्नियालीहरूसँग उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीयता र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको बारेमा जानकारी गराउने महत्त्वपूर्ण उपक्रम हो। दुर्भाग्यवस, यदि श्रीमती Godfreys अनुभव उपभोक्ताहरूको चिकित्सा आवश्यकता HMOS द्वारा कसरी व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने कुनै संकेत छ भने, हामीले प्रबन्धित हेरचाह प्रणालीमा पुन: परीक्षण गर्नु पर्छ। कांग्रेसले एचएमओएस र उनीहरूले प्रदान गर्ने चिकित्सा उपचारको गुणस्तर छानबिन गर्न थालेको छ। धेरै बिरामीहरू विश्वास गर्छन् कि एचएमओएसले खर्च घटाउन नियमित रूपमा बिरामीहरूलाई हेरचाह र जानकारी इन्कार गर्दछ। स्पष्ट "gag नियम" जो चिकित्सकहरु HMO द्वारा निकासी छैन उपचार सल्लाह गर्न रोक्छ पनि विशेष चिन्ताको विषय हो।
मेरो संविधानसभा एकल व्यक्ति होईन जसलाई एचएमओसँग व्यवहार गर्न कठिनाई भएको थियो।
(१) सान डिएगोका रूथ म्याकिनेसको मृत्यु भयो जब एचएमओ चिकित्सकहरू हृदय रोगको निदान गर्न र उपचार गर्न र कार्डियोजेनिक झटका सम्भावनाको प्रतिक्रिया दिनको लागि मेडिकल टेस्ट प्रदान गर्न असफल भए; (२) के लस एन्जलसको खर्चले उनको जीवनको लागि झगडा गर्यो गैर-होजकिन्स लिम्फोमा क्यान्सर गलत थियो एक वर्ष भन्दा बढीको लागी निदान गरियो। मलाई भनिएको छ कि यी व्यक्तिहरू जस्तो हजारौं अन्य देशहरूमा पनि यस्तै कथाहरू भएका छन्।
म आदरपूर्वक छु कि तपाईंको कार्यालयले यी दावीहरू जाँच्दछ, र राज्यको एचएमओएस सही रूपमा मोनिटर भइरहेको छ वा छैन र उपभोक्ताहरूले उनीहरूलाई गुणस्तरीय मेडिकल हेरचाह सुनिश्चित गर्न आवश्यक सूचना दिएका छन् कि भनेर अनुसन्धान गर्दछ। मलाई विश्वास छ श्रीमती गोडफ्रेले उसको हेरचाह गर्नुपर्ने प्रणालीले घोर दुर्व्यवहार गरेको छ। यदि उल्ल .्घनको पर्दाफास भयो भने म अनुरोध गर्दछु कि उपभोक्ताहरूसँग दुर्व्यवहारको लागि जिम्मेवार ती निर्देशनहरू विरूद्ध कारबाही गरिनेछ। विस्तृत अनुसन्धानले राज्यले १२ करोड HMO उपभोक्ताहरूप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गर्दछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ। कृपया मेरो जिल्ला निर्देशक, अरमान्डो ई। अरालोजालाई जवाफ दिनुहोस् तपाईंको सब भन्दा चाँडो oppurtune मा।
कर्प जवाफ विभाग
जो जोशुआ गोडफ्रे कैलिफोर्निया र यो राष्ट्रको जनतासँग साझा गर्छन्:
निगम विभाग क C्ग्रेसमन्सलाई जवाफ दिने पत्र जुलाई २,, १21996 XNUMX
RE: फाईल कुनै ALPHA छैन
म माथि उल्लेखित व्यक्तिहरू र उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा सेवा योजना, क्यालिफोर्नियाको सिग्ना हेल्थकेयरको सम्बन्धमा जून 30, १ 1996 4। मा प्राप्त भएको तपाईंको मे ,०, १ 1996 XNUMX letter को पत्र प्राप्त गर्दैछु।
निगम विभाग (? विभाग?) सिग्ना स्वास्थ्य सेवा र अन्य स्वास्थ्य सेवा सेवाहरु को नक्स-कीन स्वास्थ्य सेवा सेवा ऐन (स्वास्थ्य र सुरक्षा कोड १1340० एट सेक्वायर) र कमिश्नरको नियमहरु (सीसीआर धारा १ 1300.40००.XNUMX० एट seq) को नियमन गर्दछ। ।)। डिपार्टमेन्ट प्रत्येक र सहयोगका लागि हरेक अनुरोध लिन्छ (? आरएफए?) हामी धेरै गम्भीरताका साथ प्राप्त गर्दछौं। विभागले प्राप्त गरेको आरएफएहरू व्यक्तिगत मुद्दा (हरू) को सम्मान मात्र गर्दैन, तर सम्भावित प्रणालीगत समस्याहरूप्रति पनि आँखा राखिएको छ। आरएफए समीक्षा विभागको समग्र नियामक प्रयासहरुको एक महत्वपूर्ण तत्व हो।
विभागले गोडफ्रे परिवारद्वारा सबमिट गरिएको सबै आरएफएको समीक्षा वा समीक्षा गरेको छ। जोसेफिन गोडफ्रेको केस विभागको प्रवर्तन विभाग द्वारा समीक्षा गरियो। यो समीक्षा समावेश थियो, तर सीमित थिएन, प्रासंगिक चिकित्सा रेकर्ड को एक परीक्षण, योजना कर्मचारीहरु संग साक्षात्कार, र Godfrey परिवार संग विस्तृत छलफल। यस समीक्षाको परिणाम स्वरूप, प्रवर्तन विभागले निर्धारित गर्‍यो कि सिग्नाले श्रीमती गोडफ्रेको विशिष्ट गुनासोहरूलाई सन्तोषजनक रूपमा सम्बोधन गरेको थियो र यी समस्याहरूको समाधानका लागि रणनीति बनाएको थियो।
क्रिस्टोफर गोडफ्रेको आरएफएको बारेमा, सिग्ना दुवै श्रीमती र श्रीमती गोडफ्रेलाई उनीहरूको वर्तमान हेरचाहको समन्वयमा सहयोग गर्न र उनीहरूले सामना गर्न सक्ने कुनै समस्याहरूको समाधान गर्न आरएन उपलब्ध गराउन सहमत भए। यी दुबै आरएफए अब बन्द छन्। यद्यपि, यी र सबै आरएफएमा जानकारी नक्स-कीन ऐनको साथ स्वास्थ्य योजनाको अनुपालन सुनिश्चित गर्न विभागको चालु नियमनमा समाहित छ।
डिपार्टमेन्ट तथाकथित? Gag को बारे मा तपाइँको चिन्ता साझा? प्रदायक सम्झौतामा खंड। विभागले भर्खरै यसको प्रदायक सम्झौतामा एउटा धारा मेटाउने योजनाको आवश्यकता थियो जसले प्रदायकलाई योजना "राम्रो प्रकाश" मा राख्नको लागि बाध्य पारेको थियो। हालसालै सबै इजाजतपत्रहरूसँगको कुराकानीमा विभागले यसो भन्यो: “प्रत्येक अनुबन्धित चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यसेवा पेशेवरले बिरामीको स्वास्थ्यलाई असर गर्ने विषयहरूको बारेमा ईमान्दारीपूर्वक सही कुरा गर्न सक्नेछ र विश्वासको परम्परागत सम्बन्धलाई बढावा दिन इच्छुक हुनुपर्दछ। बिरामी र स्वास्थ्य सेवा पेशेवर बीच एक विश्वास।
बन्द गर्दा, म फेरि स्वास्थ्य सेवा सेवा योजनाहरुमा भर्ना लाखौं क्यालिफोर्नियालीहरुप्रति विभागको प्रतिबद्धतामा जोड दिन चाहन्छु। यदि तपाईंसँग अतिरिक्त प्रश्नहरू छन् भने कृपया विशेष सहायकलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् (नाम बायाँ बाहिर) भवदीय,
किल पॉल बिशप
मैले यो कथा व्यवस्थापकहरूलाई लेखें जब म १ story बर्षको थिएँ, र म तपाईंसँग बाँड्न चाहन्छु।
म १ 14 बर्षको भएँ र म चिकित्सा बिरामीको शिकार छु। म क the्ग्रेस र सिनेटलाई पत्र लेख्दै छु किनकि तपाईंले मेडिकल बिरामीबाट पीडितलाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ। म बिरामी थिएँ, मेरो टाउको दुख्यो र मेरी आमाले मलाई डाक्टरको अगाडि लैजानुभयो। म प्राय: नाक ब्लीड र खराब टाउको दुखाइ रहेको थियो। मलाई लाग्छ कि यो १ 1992 1993 २ को अन्त्यमा वा १ 1993 1994 early को शुरुमा शुरू भयो। तिनीहरूले भने कि म ठीकठाँ हो, र मलाई याद छ एक जना डाक्टर मेरो आमा र ममा धेरै नै थिए। उनी पनि यसका बारेमा कुरा गर्न चाहिनन्। उनले भनिन् कि यो मेरो टाउकोमा थियो, र म ठीक छु। १ XNUMX XNUMX and र १ XNUMX XNUMX मेरो जीवनमा राम्रो वर्षहरू थिएनन्। म दुखी थिए। मेरो आमा सँधै बिरामी हुनुहुन्थ्यो, सधै ओछ्यान खान्दा, सदैव CIGNA औषधि पाउँनुहुन्थ्यो, सधैं थकित हुनुहुन्थ्यो। मेरी आमा अब उही आमा हुनुहुन्न; मेरो टाउकोमा चोटपटक चोट लागेको छ, र मेरी आमालाई कष्ट दिन म थकित छु किनकि ऊ कस्तो बिरामी रहेको मैले थाहा पाएँ। उनी सँधै उदासिन, सधै रुँदै थिई, र सधैं मूडी र खोकी थिइन्। म उनलाई रातमा चुपचाप चिच्याउनेछु र उनले हामीलाई जागृत राखिन्, अब मलाई नराम्रो लाग्छ।
फेब्रुअरी १ ​​1994 XNUMX, मा, म निराश भएको थिए, मेरो टाउको दुखाइदै थियो, र मैले औषधि क्याबिनेटबाट औषधी लिने औषधी बनाएँ, यो मैले पहिलो पटक गरिनँ, तर मेरी आमा बिरामी थिइन्, उनलाई ध्यान दिइएन। प्रत्येक चोटि मैले बढी लिईं र एक दिन मेरी आमा मलाई उठाउन भित्र आई र म उठ्न सक्दिन, म धेरै थाकेको थिएँ। मेरी आमाले भने कि त्यो? हामी अहिले सिगना जाँदैछौं। म त्यहाँ गएँ र सिगना डाक्टरहरूले मलाई देखे। उनीहरूले मलाई मानसिक स्वास्थ्य स्थानमा पठाए र यी दुबै ठाउँहरू दुवैले मलाई के गरेको थाहा थिएन। मेरी आमा मलाई हिँड्नुभयो र मैले उनलाई मैले गरेको विज्ञापन बताएँ। पछि त्यो दिन उनले मलाई मरे भने कसरी ऊ बाँच्न सक्छ भनेर भने। मेरी आमा रुन्थिन् किनभने उनी धेरै थाकेकी थिइन उनले आफैलाई दोष दिए किनभने उनी पर्याप्त थिइनन्। मैले मेरी आमालाई यो फेरि नगर्न वचन दिएँ। मेरी आमाले CIGNA लाई फोन गर्नुभयो र तिनीहरू कसरी डाक्टरहरू हुन् भनेर उनीहरूलाई सोधेर मलाई मार्ने प्रयास गरेकी देखेर उनीहरू असन्तुष्ट भए। मेरो आमा धेरै चिच्याए उनीहरू मलाई एक पूर्ण शारीरिक दिन सहमत भए। मार्चको सुरुमा शारीरिकमा, हामी मेरो टाउकोको बारेमा यति धेरै गुनासो गर्‍यौं कि उनीहरू मेरो टाउकोको स्क्यान गर्न सहमत भए। यो झन्डै अडीच महिनासम्म चल्यो, एक पछि अर्को स्क्यान भयो, र अन्तमा डाक्टरले भने कि मलाई मेरो साइनस धुनुपर्‍यो, जुन मेको अन्त्यमा थियो। मेरी आमाले सोध्यो यदि यो जरुरी छ भने, के यो अहिले नै गर्नु आवश्यक छ, डाक्टरले जवाफ दिए कि यो जरुरी थिएन। मेरी आमाले हामी गर्मी छुट्टी मा यो गरेको थियो भने।
मे देखि अगस्त सम्म, मेरी आमा धेरै बिरामी पर्नुभयो। उनी डाक्टरकहाँ गइन् र तिनीहरूले उनलाई weeks हप्ताको लागि अपा .्गता राखिदिए। जुलाई को बीचमा, मैले मेरो सपना देखें कि मेरी आमालाई फोक्सोको क्यान्सर छ र ऊ मर्नै लागेको छ। मैले उनलाई यो बताउँदा मेरी आमा एकदमै निराश हुनुभयो। अगस्टको सुरूमा, मेरी आमाले मलाई हजुरबुबा हजुरआमा भेट्न एक महिनाको लागि आयरल्याण्ड पठाउनुभयो। अगस्तको अन्तमा जब म आयरल्यान्डबाट फर्कें, हाम्रो घर भैरहेको थियो, २ हप्तासम्म सिआईजीएनएले मेरी आमालाई हराएको कुरा बताएर उसको सबै एक्स-रे दिन इन्कार गरेको थियो। उनी भर्खरै उनीहरुसँग थिइनन् र यसले उनलाई लगभग २ बर्षसम्म फोक्सोको क्यान्सर भएको देखायो। मेरी आमाको एउटा शल्यक्रिया भयो र उनको फोक्सोको २०% हटाइयो। उनलाई कार्सिनोइड ट्यूमर थियो। जब मेरो आमा अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो, सर्जनले मेरो सौतेनी बुबालाई भने कि उनी पनि ठीक छैनन्। यो समाप्त भयो कि CIGNA ले २ हप्ता सम्म मेरो सौतेनी बुबाको रेकर्ड जारी गर्न अस्वीकार गर्‍यो। जब तिनीहरू बाहिरी डाक्टरमा गए, सिग्नाले उनलाई दमको लागि उपचार गर्दै आएका थिए; ऊसँग वास्तवमै COPD को धेरै उन्नत केस छ र उसको बाँया फेफुमा केहि थियो मेरी आमाले जस्तै।
हामी गए र हाम्रो सबै परिवार को लागी रेकर्ड मिल्यो। जब हामीले मेरो देख्यौं, र हामी बाहिरी डाक्टरमा गयौं, डाक्टरहरू बाहिर गए पछि मलाई थाहा भयो कि वास्तविक डाक्टर र सिगना डाक्टरको बीचमा के भिन्नता छ, र मलाई आशा छ कि एक दिन म तपाईंलाई सबै कुरा बताउन जानेछु। । मलाई हड्डी नष्ट हुने क्रममा समस्या भएको थियो, जहाँ हड्डी कक्षाको माध्यमबाट धकेलीरहेको थियो, र डाक्टरले भने कि मेरो आँखा बाहिर निकालिने थियो। मैले देवदार-सिनैमा मेरो शल्यक्रिया गरें। १ 1995 1993 that भन्दा बढी राम्रो छैन किनकि त्यहाँ १ XNUMX। मा यी सबै कुराका लागि न्याय नभएको जस्तो देखिन्छ जुन सिआईएनजीएले हामीलाई गरेको थियो। हामी कानूनहरू परिवर्तन गर्न चाहान्छौं ताकि कोही पनि फेरि त्यस्तो कष्ट भोग्नुपर्नेछ। CIGNA ले आज सम्म हाम्रो परिवारलाई दुर्व्यवहार गर्छ। उनीहरूले मेरी आमालाई घण्टासम्म रोइरहन्छन् र म आशा गर्छु कि तपाईले मलाई यसबारे पनि बताउनुहुनेछ। सिगनालाई यो पनि थाहा हुनुपर्दछ कि यदि मेरा बाबुआमा मरे, म कहाँ जान्छु, र मेरो भाइ र बहिनीहरूलाई के हुन्छ? म एक अमेरिकी हुँ, र जब म ठूलो हुन्छु, म यहाँ बाँच्दिन। मँ बसाल्न चाहन्छु जहाँ मानिसहरु राम्रो र दयालु छन्। म आयरल्याण्ड मा सर्ने छु।
अब म २ 27 बर्षको भएँ। यद्यपि यो ज्यादै दु: खी छ कि कुनै पनि परिवारले यस प्रकारले कष्ट भोग्नु परेको थियो, र यी अपराधी र ठगहरू क्यालिफोर्निया राज्यमा सजायबाट उम्के।
तपाईं सिग्ना चमकदार धन्यवाद
टेस्टमनी सेनेट नियमहरू क्यालिफोर्नियाको सुनुवाई राज्य सोमबार मे १२, १ 12 1997 2.03 ०.०XNUMXPM मा कमिट गर्दछ
म तपाईंसँग मेरा अनुभवहरू बाँड्न आएको हुँ। निगम विभाग यसको नियामक कार्यमा असफल भइरहेको छ, र मेरो परिवारको अनुभवले यो दर्साउँछ। र सिग्ना हेल्थकेयरको साथ मेरो आफ्नै व्यक्तिगत अनुभवले उपभोक्ताहरू कसरी दुर्व्यवहार भइरहेका छन् र कर्पोरेसन डिपार्टमेन्टले कसरी आँखा चिम्लिरहेको छ भनेर वर्णन गर्दछ।
Cigna को साथ मेरो अनुभव मेरा आमा बुबा को दुरुपयोग को साथ शुरू भयो, र फलस्वरूप तिनीहरूले मेरो परिवारको प्रत्येक सदस्य बिरुद्द कि दुरुपयोग गरे। जब म बिरामी थिए र चिकित्सकको आवश्यक पर्दा उनीहरूले मलाई भेट्न बाहिर पठाउँथे र म अपमानित हुने थिए किनभने प्रायः जसो चिकित्सकले मलाई पठाएको थियो उसले मलाई आशा गरिरहेको थिएन। यसको परिणाम स्वरूप सिग्नाले मलाई चिठी पठाए जुन मैले आफ्नो चिकित्सक छनौट गर्न सक्छु र उनीहरूले मेडिकल हेरचाहको भुक्तानी गर्नेछन्। उनीहरूले यो एकपटक गरे र त्यसपछि उनीहरूले मेडिकल हेरचाहको भुक्तान गरेनन, र मलाई स collection्कलन एजेन्सीहरूले धम्की दिए कि मैले बिल तिरेन भने म मुद्दा हालिन्छ। सिग्नाले यो पनि भनिन कि म मेरो निवास स्थान सान्ता बार्बरामा मेरो मन पर्ने डाक्टर छनौट गर्न सक्छु र यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। सिग्नाले मलाई सान्ता बार्बरामा एउटा डस्टर नियुक्त गर्नुभयो तर जब म बिरामी थिएँ र भेट्न चाहन्थें र मैले डाक्टरलाई फोन गरिनँ उनले कहिल्यै मेरो कलहरू फिर्ता गरिनन्। जब हामीले डाक्टरहरूको कार्यालयमा सम्पर्क राख्यौं उनीहरूले भने कि उनीहरू सिग्ना संग काम गर्दैनन् किनभने Cigna रेफरल गर्दैन जब विशेषज्ञहरु चाहिन्छ।
गत वर्ष मलाई विशेष हेरचाहको आवश्यकता पर्‍यो, र प्रक्रियाको क्रममा डाक्टरले मलाई बायोप्सी चाहिन्छ भनेर भने। जारी राख्न उनी बीचमा रोकिनु पर्‍यो र सिगनाबाट प्राधिकरण लिनुपर्‍यो। डाक्टरले भने कि ती दुई प्रक्रियाहरू जोडिएका थिए र उनलाई यस प्रकारले मेडिसिन गर्नु कहिले पनि अपेक्षित थिएन। यस प्रक्रिया पछि मैले कर्पोरेसन विभागमा उजुरी गरेपछि यस सिग्नाले अभियोगलाई अस्वीकार गर्‍यो र डाक्टर गल्ती भएको हो भन्ने जवाफ दियो। त्यस समयदेखि डाक्टरले सान्ता बार्बरामा रहेका उनका व्यवस्थापिकाको अगाडि उनले भने कि उनले बायोप्सी उनीहरूको अनुमति बिना नै गरे र मेरो घटना सही थियो। डाक्टरले भने कि मलाई प्रत्येक days ० दिनमा अनुगमन आवश्यक छ किनकि यो पूर्व क्यान्सर अवस्था हो। सिग्नाले मलाई भने कि यदि मलाई यो विशेष हेरचाहको खाँचो छ भने मलाई प्राथमिक हेरचाह गर्ने डाक्टरको माध्यमबाट जान आवश्यक छ कि मलाई आवश्यक छ, र उनीहरूले मलाई सान्टा मारियामा प्राथमिक उपचार डाक्टर नियुक्त गरे, एकै काउन्टीमा नभई एक घण्टा भन्दा बढी मेरो निवासबाट
म एक विद्यार्थी हुँ म UC सान्ता बार्बरा जान्छु, र म यातायात छैन। यो केवल एक व्यावहारिक विकल्प मात्र होइन। र निगम विभागले मलाई सहयोग गर्नुको सट्टा सिग्नामा एक व्यक्ति थियो जुन मलाई सताउने र मेरो उपचारमा बाधा पुर्‍याउने जिम्मेवार थियो।
हालसालै धेरै वर्षसम्म युनाइटेड भएपछि मेरो कम्पनीले सिगनामा परिवर्तन गर्यो। मैले भर्खरै मेरो पछाडि एक एमआरआई गर्नु पर्ने भयो र डीआरएसका सेक्रेटरी सिआईजीएनएले कुनै पनि आधिकारिकतामा नराम्रो रहेको बतायो। यसलाई स्वीकृत हुन days दिन लाग्यो, तर मेरो डाक्टरले शाब्दिक रूपमा माग्नुपरेको थियो। मात्र मलाई उनीहरूले प्रक्रियाहरू स्वीकृत गरे पनि भनिएको थियो, तिनीहरू कहिलेकाँही घुमाउँदछन् र यसलाई अस्वीकार गर्दछन् कि यो उनीहरूको विशिष्टीकरणको लागि अधिकृत छैन, र तपाईं विधेयकमा अडिनुभयो। सिग्ना टोनाइटबाट कल गर्नका लागि यदि भविष्यमा मेरो पीसीपीमा जानु भन्दा भविष्यको फोक्सो, मुटु, पछाडि, वा हड्डी सम्बन्धी समस्याहरूको लागि "तिनीहरूको नुरस" बोलाउन म इच्छुक छु कि छैन भनेर हेर्नको लागि !! मैले उनीहरूलाई भने कि म फोनबाट "हेर्न" सजिलो हुँदैन र जे भए पनि धन्यवाद। उनी अफ्ठ्यारामा थिए। मैले अफरमा नफर्काएको आवाज सुनेँ।
म भविष्यमा हुने कुनै पनि मेडिकल मुद्दाहरूमा म एकदम डराएको छु खास गरी मेरो y वर्ष पुरानो हो र सीआईजीएनए टिप्पणीहरू पढिसकेपछि पनि यसलाई बेवास्ता गर्ने कम्पनीजस्तो देखिन्छ। म मात्र प्रार्थना गर्दछु कि हामी सबै स्वस्थ रहन सक्दछौं, किनकि सिग्ना पैसाको रूपमा होइन बिरामी!!!! यो केवल १ हप्तामा मलाई स्पष्ट पारियो !!!!!!!!!!!
हिजो रद्दी टोकरी
म एउटा ठूलो एयरलाइन्सको लागि काम गर्दछु सिग्नाको साथ मेरो ईन्सको रूपमा। मैले काममा, मेरो जागिरमा मेरो पिठ्ठा भाँचे, भित्र पसे। यस ह्याger्गर प्रबन्धकले मलाई भन्छ कि यो "जॉबमा चोटपटक होइन" !!
मैले मेरो इन्स "दीर्घकालीन अशक्तता" सिग्नाबाट गुमाएँ। ठीक छ, तिनीहरूले - cigna मलाई एक शारीरिक चिकित्सा को वेश्या को लागी पठाए कि cigna बताउन को लागी उनीहरु सुन्न चाहन्थे। त्यसो भए, म मेरो पछाडि कुनै सहयोग बिना दु: खमा डुल्दै छु। कोसँग उत्तर छ र यदि कोहीले फोनम नम्बर कल गर्न चाहन्छ भने किनभने म बक पास गर्दैछु र मसँग कल गर्न नम्बरहरू हुनुपर्दछ, ती सबैले सहयोग गरेनन् तर केटासँग उनीहरूसँग फोन नम्बरहरू छन् !!
बन्दमा, मेरो गधालाई चुम्बन गर्नुहोस् ती व्यक्तिहरूको लागि जुन लागू हुन्छ, त्यसको लागि होईन, पछुतो लाग्छ तपाईंको पीडाको लागि र जीवन गुमाउनु भयो
मेरी आमाको ११ बर्ष बितिसकेको छ र सिग्ना उनको बिमा हुन् जुन उनी फ्लुको लागि अस्पतालमा थिए। छोटो अवधिको पछि उनी अस्पतालमा हुँदा उनी झनै खराब भयो तर राम्रो उपचार गर्नुको सट्टा हामीले अस्पतालको लागि काम गर्ने एक महिलाको भेटघाट गर्यौं र मेरी आमा र मैले उनलाई भने कि मेरो घर जानु पर्छ किनकि सिग्नाले पैसा तिर्ने छैन। अब उनको बसाई। मेरी आमा 11 55 वर्षको मात्र हुनुहुन्थ्यो जब सिग्नाले उनलाई अस्पतालबाट बाहिर निकाली। हामीलाई थाहा थिएन तर मेडिकल रेकर्डका कारण थाहा हुन सक्ने सिग्नालाई अस्पतालमा कुनै पनि प्रकारको भुक्तानीको लागि पठाइनु पर्‍यो जुन मेरी आमाको आन्द्रामा आन्द्रापट्टि थियो र मलाशयबाट रक्तस्राव भयो र हुन सकेन। उनी आफै उभिनुहोस् जब उनलाई Cigna भनियो तिनीहरूले अब उपचार को लागी पैसा तिर्ने छैन। मेरी आमा त्यो हप्ता भित्र पछाडि ER मा फर्किन्थ्यो यति बिरामी कि उनीले उनको रगत लिन सकिनन किनभने उनी मर्छिन् त उनी आईसीयूमा राखिन् र त्यसपछि हामीले थाहा पाउँ कि ऊ आन्द्रा भित्र टाँसिएको थियो। उनलाई शल्यक्रियाको आवश्यकता पर्दछ तर यो चाँडै पूरा नभएसम्म उनलाई बस त्यहाँ बसिरहेको आन्द्राबाट उसको सम्पूर्ण आन्द्रा संक्रमित हुन खोलियो किनभने मेरी आमालाई थाहा थिएन कि उनीसँग यो छ तर सिग्नाले उनलाई अस्पताल बाहिर फ्याँकिदिए। त्यसपछि उनलाई जीवन समर्थन दिइयो र days दिन भन्दा कम पछि १7दिन अघि म २१ वर्षको भएँ मैले मेरी आमालाई जीवन समर्थनबाट हटाउन हस्ताक्षर गर्नु पर्‍यो किनभने त्यहाँ कुनै संक्रमण नभएको कारण इन्फेक्सन कत्ति छिटो फैलिएको थियो भनेर आशा थिएन। अस्पताल बाहिर। यसलाई तपाईको मनपरी फोन गर्नुहोस् तर यो हत्या हो जब पैसा वा सही बिमाले मेरी आमालाई जीवित राख्नुहुने थियो तर उनीसँग सिगना एचएमओ थियो किन कि उनीहरूले निर्णय गरे कि उनी भुक्तान योग्य थिएनन्। अझै ११ बर्ष पछि, म अझै पनी आश्चर्य लाग्दछु कि कति जना उनीहरूको हातमा मरे।
सिग्नाको हातमा कष्ट भोग्ने जो जोशुआ गोडफ्रेले युनाइटेड पेन्टिसेन्ट अफ अमेरिका स्थापना गरे।